စင်္ကာပူ နိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ များ နှင် ဆက်သွယ်နေသူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၂၇)ဦး အား ဖမ်းဆီး - THIT HTOO LWIN (Daily News)
Home / နိုင်ငံတကာသတင်း / စင်္ကာပူ နိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ များ နှင် ဆက်သွယ်နေသူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၂၇)ဦး အား ဖမ်းဆီး
စင်္ကာပူ နိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ များ နှင် ဆက်သွယ်နေသူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၂၇)ဦး အား ဖမ်းဆီး
Breaking news on 20-1-2016
စင်္ကပူ နိုင်ငံတွင်းမှ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတွေကို ခုလိုဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခဲ့တာဟာ နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး ဥပဒေအရ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား တရားခံ ၂၇ ယောက်ဟာ နိုင်ငံတကာက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ တွေကို လှို့ ဝှက်
ဆက်သွယ်ပြီး အကြမ်းဖက် လက်နက်ကိုင် သင်တန်းတွေ တက်ထားကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ မှာ အဖွဲ့ ဝင် စာရင်းနံမည်တွေ ရထားသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
တပါတ်တခါ ဗလီဝတ်ပြုပွဲမှာ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်ဘို့အစည်းအဝေး တွေလုပ်နေကြတာကို စင်္ကာပူရဲတွေက အချိန်မှီ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၂၇)ဦး မှာ -
From left to right: Alam Khurshed, 27; Alam Mahabub, 34; Ali Abdul, 40. Ali Md Ashraf, 33; Alim Abdul, 32; Aminur, 31. Golam Jilani Abdur Rouf, 27; Haque Md Mofazzal, 29; Hasan Md Mahmudul, 30. Photo: Singapore’s Ministry of Home Affairs
ယခုဖမ်းဆီးတဲ့ သူတွေကို ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အဖွဲ့ စည်းတွေက ငွေကြေး ရန်ပုံငွေများ ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။
အကြမ်းဖက်နည်းပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသရုပ်ပြ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုရုပ်သံတွေ ကို အွန်လိုင်းကနေ ဖြန့် ဝေသင်ကြားပေးနေတာပါ။
ဒါ့အပြင် ခလေးငယ်တွေ ကို အကြမ်းဖက် သင်တန်းများ ပေးဘို့ရှာဖွေပြီး ဆီးရီးယား နိုင်ငံကို ပို့ ဆောင်စေလွှတ်နေကြတာကို လည်းအသေးစိတ် ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
စင်္ကာပူ နိုင်ငံအတွင်း အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ များ နှင် ဆက်သွယ်နေသူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား (၂၇)ဦး အား ဖမ်းဆီး Reviewed by THITHTOOLWIN on 17:02 Rating: 5